के हाे मधुमेह ? रोकथाम कसरी गर्ने ? मधुमेहबाट बच्ने यी हुन् सजिलो ५ फर्मुलाहरु - ज्ञानविज्ञान
१.टाईप वान् डाईबेटिज
यसका बिरामी दूब्ला पातला हून्छन् । ४० वर्ष भन्दा कम उमेरमा बढी हून्छ । यो प्रकारको मधूमेह इन्सूलिनको अभावका कारण हूने हुँदा उपचारका लागि इन्सुलिन नै चाहिन्छ । बिरामीमा तुरुन्त लक्षणहरु देखिन्छ । यो बशांणुगत हूँदैन ।
२.टाईप टु डाईबेटिज
यसका बिरामी प्राय मोटा हून्छन् । ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका लागि बढी हून्छ । यो प्रकारको मधुमेहमा इन्सुलिन रेसिष्टेन्ट (इन्सुलिनले काम गर्ने शक्ति घट्ने अवस्था) हुने हुँदा खाने चक्की वा इन्सुलिन नि आवश्यकता पर्न सक्छ । बिरामीमा लक्षणहरु ढिलो देखिन्छ । यो बशांणुगत हुन्छ ।
१.पिसाब बढी लाग्ने (एक रातमा तीन वा सोभन्दा बढी पटक) ।
२.तिर्खा बढी लाग्ने ।
३.भोक धेरै लाग्ने ।
४.तौल घट्ने (टाईप वान डाईबेटिज)
५.गुप्ताङ्ग चिलाउने ।
६.केटाकेटीमा रातमा बिस्तारामा बढी पिसाब गर्ने ।
७.थकाई धेरै लाग्ने ।
८.घाउ ढिलो निको हुने ।
९.आाखा धमिलो देख्ने ।
१०.हातखुट्टा झम्झमाउने ।
मनमोजी रूपको जीवनशैलीलाई मधुमेहले स्विकार्दैन । खानपान, रहनसहन बानी व्यहोरामा तपाईंले केही परिवर्तन गर्नैै पर्ने हुन्छ । तर यसको अर्थ कठोर जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । मधुमेही रोगीले पनि नियमित औषधि सेवन गरी परिवर्तित जीवनशैलीको कारणबाट मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । योगाभ्यास, सहनशील, सादा जीवन र उच्चविचार शैलीले मधुमेह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । चिन्ता र भयमुक्त वातावरणमा हाँस्ने हँसाउने मनस्थितिमा रहनु मधुमेहीका लागि लाभदायक हुन्छ ।
मधुमेहीले आहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नियमित निर्धारित समयमा खाना र खाजा खानुपर्छ । लामो समयसम्म नखाइकन भोको बस्नु हुँदैन । चिनी र चिनी भएका खाद्यवस्तु जस्तै चिनी हालेको (चिया वा कफी, हर्लिक्स, कोकाकोला, पेप्सी) आदि खानु हँुदैन । यसका अलावा आइसक्रिम, मह, चकलेट, सक्खर, चाकु, जाम खानु हुँदैन । खाना खाँदा एकैपटक टन्न नखाई दिनको तीन चारपटक खाना खाइरहनुपर्छ । एकपटक भात र अर्को पटक रोटी खानु राम्रो हुन्छ । खानपानमा विचार गर्न नसकिए औषधि सेवनले मात्र यसबाट नियन्त्रणमा राख्न सकिँदैन ।
मधुमेहको किसिमअनुसार टाइप एक र दुईमा चिकित्सकको सल्लाहमा मधुमेहीले औषधि सेवन गर्नुपर्छ । इन्सुलिन इन्जेक्सन लिनुपर्ने भएमा इन्जेक्सन लिन्न भन्नु हँुदैन । खाने औषधिजस्तै बानी परेपछि इन्सुलिन लिन झन्झट महसुस हुँदैन । चिकित्सकसँंग नियमित परामर्श लिइरहनुपर्छ । समयसमयमा रगत परीक्षण गराई रहनुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ । औषधि बीचमा छोड्नु हँुदैन । अब त निको भइसक्यो भन्दै औषधि खान छोड्नु हँुदैन ।
Don't Miss it जीवनमा आएका चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने ?
Up Next धनी बन्नका लागी रतन टाटाले दिएका १० प्रभावकारी टिप्स